San Htun's Diary: ရက်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၁၄
ဆောင်းဦးကာလ ရောက်ပြီမို့သိသိသာသာ အေးလာပါပြီ။ သစ်ပင်တွေကလည်း အဝါရောင်၊ အနီရောင်ပြောင်းလို့သြကာသလောကတခုလုံး ဝါရွှေနွယ်သွေးခင်းနေပါတယ်။ သာယာလှပသော ဆောင်းဦးကို ရွှေဖရုံးသီးတွေ၊ ရိုးပြတ်တွေနဲ့ဒီလို ကြိုဆိုကြပါတယ်။
ဒီလိုအချိန်အခါသမယမှာ The Lady လို့တင်စားကြသော ဒီမိုကရေစီအိုင်ကွန် အမေစု စတိတ်ကို ရောက်ရှိလာပြီလို့စူပါဗိုက်ဆာ ဂျရတ်က သတင်းပေးပါတယ်။ နယူးယောက်၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီ၊ ဖို့ ဝိန်း၊ လော့အိန်ဂျယ်လစ်မြို့တွေဆီကို အမေစု သွားရောက်မယ်လို့သိပေမယ့် ကန်တက်ဂီပြည်နယ် လူဝီဗီလ်တက္ကသိုလ်ကို လာရောက်လာမယ်လို့ဘယ်လိုမှ မျှော်လင့်မထားခဲ့ပါ။ ဗွီအိုအေက သိရချိန်တုန်းက လူဝီဗီလ်မှာ နေထိုင်သော စန်းထွန်းတယောက် ဘယ်နှယ့်နေမလဲလို့မှန်းကြည့်ကြပါ။
လူဝီဗီလ်ကနေ နှစ်နာရီအဝေးမှာရှိတယ့် လက်စင်တန်မြို့က ကန်တက်ကီတက္ကသိုလ်မှာ နိုဘယ်ဆုရ ဘုန်းတော်ကြီး ဒက်စမွန်တူးတူးနဲ့အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဂျင်မီကာတာ လာရောက်ဟောပြောတုန်းက အမေစုအကြောင်း ပြောသွားကတည်းက တွေ့ ဖူးချင်နေတာပါလို့ဂျရတ်က ဆိုပါတယ်။ လူဝီဗီလ်တက္ကသိုလ် မက်ကွန်နယ်စင်တာက နိုင်ငံခေါင်းဆောင်၊ စာရေးဆရာ၊ သမိုင်းပညာရှင်တွေကို ဖိတ်ကြားပြီး မိန့် ခွန်းပြောတယ့် အစဉ်အလာရှိပါတယ်။ Waiting List တင်ထားပေမယ့် အမေစုကို လေးစာကြတယ့် အမေရိကန်တွေ တအားများတာကြောင့် လက်မှတ်ရဖို့မလွယ်ပါဘူး။
အံမယ် တရုတ်ကြီး ပီတာလည်း အမေစုအကြောင်း သိတယ်။ ပိုက်ပါရဂူ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး အဲရစ်ဆင်ကလည်း အမေစုကို သိတယ်။ သူ့ လေသံက တခြားအာရှသားတွေနဲ့ မတူ ဘိလပ်သံ ပီသလို့ တဲ့။ တို့ များလို ငါးပိလေသံ မဟုတ်ဘူး သူ့ မိန့် ခွန်းတွေများ နားထောင်ရတာ သိပ်ကောင်းသဗျား။ နိုင်ငံရေး စိတ်မဝင်စားတယ့် စီနီယာ ဝီလီယမ်ဂရင်းရယ် မန်နေဂျာဟောင်း ဒေးဗစ်ရှနယ်က မသိပေမယ့် မန်နေဂျာသစ် ကယ်လီဖနယ်လီကတော့ သိတယ် နေအိမ်အကျယ်ချူပ် ၁၅နှစ် ကျတယ့် အမျိုးသမီးတဲ့။ ကန်တက်ကီတက္ကသိုလ်မှာ သမ္မတဟောင်း ဘီလ်ကလင်တန် လာပြောတုန်းက ကန်တက်ကီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား သူ့ သူငယ်ချင်းတွေဆီက လက်မှတ်ရတာမို့ လို့လူဝီဗီလ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအသိရှိရင် လက်မှတ်ရနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ရုံးထဲ လူဝီဗီလ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားရှိမရှိ မောင်းထုရမယ့်ပုံပဲ။ လက်မှတ်ရဖို့အခွင့်အရေးနည်းလို့ဖို့ ဝိန်းကိုသာ ချီတက်ပါတဲ့။
အရင် ရက်ကွက်ပို့ စ်တွေတုန်းက မြို့ခံပြိုင်ဖက်နှစ်သင်းဆိုပြီး ဖြီးထားတာ အမှန်က တပြည်နယ်ထဲက တက္ကသိုလ်ပြိုင်ဖက်တွေ ပိုမှန်ပါတယ်။ CARDINALS အတိုကောက် CARDS လို့ခေါ်ကြတယ့် အနီရောင်အသင်းက University of Louisville (UofL) လူဝီဗီလ်တက္ကသိုလ်အသင်းဖြစ်ပြီး WILDCATS အတိုက်ကောက် CATS လို့ ခ်ါကြတယ့် အပြောရောင်အသင်းက University of Kentucky (UK ) ကန်တက်ကီတက္ကသိုလ်အသင်းပါ။ တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံ ဘက်စကက်ဘောပြိုင်ပွဲမှာ UK က ချန်ပီယံပါ။ ဘက်စက်ဘောရာသီချိန်ဆို တမြို့လုံးရဲ့အိမ်တွေ၊ ကားတွေမှာ အနီရောင်၊ အပြာရောင်အလံလေးတွေ ပလူပျံနေတတ်ပါတယ်။
ဖို့ ဝိန်းကို လှမ်းမေးတော့ အကြီးဆုံးခန်းမကြီးကို ငှားထားပြီး ဝင်ခွင့်ဖရီးပါတယ့်။ ကိုယ့်မြို့ကို လာရဲ့ သားနဲ့တွေ့ ဖို့ ခက်လို့ဖို့ ဝိန်းမှာ သွားတွေ့ ရတယ့်အဖြစ်။ အမေစုကို တီဗွီမှာ မြင်ဖူးပြီး အပြင်မှာ တခါမှ မမြင်ဖူးဘူး။ တခါလောက်တော့ မျက်စိနဲ့တပ်အပ်မြင်ဖူးချင်တယ်။ ကန်တက်ဂီပြည်နယ် လူဝီဗီလ်ကနေ မြောက်ဖက်စူးစူး အင်ဒီယားပြည်နယ် ဖို့ ဝိန်းအထိ မိုင် ၂၅၂မိုင်ဝေးပြီး ၄နာရီခွဲ မောင်းရမှာပါ။ ဘတ်ဂျက်မရှိလို့ရှေ့ လက အလုပ်ဖြုတ်ခံရတယ့် ရာမားလည်း ဝါရှင်တန်ဒီစီဖက်မှာ အလုပ်ရလို့အလုပ်သစ်မတက်မှီ ကြားနှစ်ပတ်ကာလ စင်စင်နာတီက ဆူနမ်ဆီကို ရောက်နှင့်နေပါတယ်။ စက်တင်ဘာ ၂၂ စနေနေ့စာမေးပွဲပြီးတာနဲ့အိုဟိုင်းရိုးပြည်နယ် စင်စင်နာတီကို ချီတက်ပါတယ်။
စာမရတာရယ်၊ အလုပ်ပင်ပန်းတာရယ်ပေါင်းပြီး စာမေးပွဲခန်းမမှာ ဆူနမ်က အန်လို့ တဲ့။ ရာမားရှိနေလို့ သာပါပဲ။ တယောက်တည်း မေ့လဲနေရင် ဒုက္ခ။ တွေ့ တိုင်း ကျန်းမာအောင်နေ၊ အားရှိအောင်စား၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်ဖို့မှာရတာ။ ကိုယ်လည်း အတူတူပါပဲ။ အလုပ်တဖက်နဲ့စာလုပ်ရတော့ အနားကပ်ပြီး တွန်းပေးမယ့် ပရက်ဖော်ဆာ မရှိ။ စာမေးပွဲနီးမှ အသည်းအသန်ခဲမှန်ကြတော့ စိတ်ဖိစီးကြတာပါပဲ။
ဝါရှင်တန်ဒီစီက လုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ဆူနမ်တို့ က ဆိုပါတယ်။ ညဖက်အပြင်ထွက်လို့လမ်းသရဲလေးတွေက ပိုက်ဆံတောင်းလို့ပိုက်ဆံမပေးရင် လူကို အန္တရယ်ပေးတယ်တဲ့။ နောင်နှစ်တော့ ဒီစီသွားတောလားဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ မွန်၊တမီးလ်ဒုက္ခသည်မိသားစုက အကိုကြီး ၇နှစ်အရွယ်သူ့ သားလေးကို ကုန်စုံဆိုင်ရှေ့ခဏစောင့်နေခိုင်းပြီး ကုန်စုံဆိုင်ထဲ မေ့ကျန်နေတယ့် ပစ္စည်းဝင်ဝယ်ပါတယ်။ ငါးမိနစ်တောင်မကြာ ပြန်ထွက်လာတော့ ရဲက စောင့်နှင့်နေပါတယ်။ ကလေးတွေအနီးမှာ မိဘတွေမရှိလို့ticket ပေးသွားပါတယ်။ ရုံးကို သွားမေးတော့ ဒဏ်ငွေဆောင်မလား၊ အမေရိကန်ဥပဒေတိုင်း ထိန်းကျောင်းနည်းသင်တက်မလားမေးတော့ အလုပ်ပျက်မခံချင်လို့ဒဏ်ငွေဆောင်လိုက်ပါတယ်။
မနက်ရုံးသွားရင် ဟိုင်းဝေးအမြန်လမ်းမှာ မိုင်၈၀နဲ့မောင်းတတ်တယ့် စန်းထွန်းကို ၇၅မိုင်လောက်ပဲ မောင်းဖို့ပီတာနဲ့ ဝီလီယမ်ဂရင်းက သတိပေးပါတယ်။ ပထမဆုံးတစ်ကဒ်ထိရင် ဒဏ်ငွေက ၃၀၀လောက်ဆောင်ရနိုင်ပါတယ့်။ ကားလေးပွတ်မိတာလေးကို ၉၀၀ ပေးလိုက်ရတယ့် စန်းထွန်းတယောက် ဒဏ်ငွေဆိုတာ တကယ်လန့် ပါတယ်။ အာမခံကို သုံးလိုက်ရင် တလငါးဆယ်တက်ပြီး သုံးနှစ်ပေးရမှာမို့ လို့ကိုယ့်ဘာသာပေးလိုက်တာ အကောင်းဆုံးလို့ဝိုင်းအကြံပေးကြတာကြောင့် အာမခံမသုံးလိုက်ပါဘူး။
စန်းထွန်းကားအားမခံက ဈေးအနည်းဆုံးကို ဝယ်ထားလို့ဘာမှcoverသာ မဖြစ်တာ တလတရာ ပေးရသဗျား။ ကားမောင်းလိုင်စင်က တနှစ်အောက်ဖြစ်တာရယ်၊ ပထမဆုံး ကားအာမခံဖြစ်တာရယ်၊ ကန်တက်ကီပြည်နယ်ရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တာရယ်ကြောင့် ဈေးကို ကြီးတာပါ။ စန်းထွန်းအာမခံကို ဝိုင်းဖတ်ကြပြီး စန်းစန်း သိလား နင့်အာမခံက သူများကားကို သွားတိုက်မိရင်၊ အဆောက်အဦးတံခါးတို့ ၊ ချုံပုတ်တို့ ကို သွားတိုက်မိရင် အာမခံက လျှော်တယ်ဟ။ တူရကီလေး မူဆာဖာ မိုးသီးကြွေချိန်တုန်းက သူ့ ကားအမိုး မဆိုသလောက်လေး ချိုင့်သွားတာ အာမခံဆီက လျှော်ကြေးရတယ်။ Collision ဟုခေါ်ကြသော ထိုအရာ ကျွန်ုပ်အာမခံတွင် မပါ။
နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားသော တန်နက်စီပြည်နယ် မန်ဖစ်မြို့တွင် နေထိုင်သော အတန်းဖော် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှလူမျိုး ဆိုင်ဖူးတယောက် ညဖက်ကားမောင်းရင်း သတ်မှတ်ထားတာထက် ပိုမောင်းမိလို့ရဲက ဖမ်းပြီး တစ်ကဒ် ၂၀၀ ရေးပါတယ်။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မှတ်နေချိန် ကားရှေ့ မီးသီး ပျက်နေတာတွေ့ လို့ဒဏ်ငွေ ၁၀၀ ထပ်တိုးလိုက်တယ်။ မီးဖွင့်လိုက်တော့ ကလေးက ကလေးထိုင်ခုံမှာ ခါးပတ်လည်း မပတ်၊ ထိုင်လည်းမနေဘဲ ကြမ်းပြင်မှာ ဆော့ကစားနေတာ တွေ့ လိုက်ရတဲ့ခဏ...တရားရုံးကိုသာ တန်းသွားပါတဲ့။ ဆိုင်ဖူးခမျာ ရှေ့ နေငှားကာ ထုချေရင်း တရားစွဲခံနေရလေရှာသည်။ ကုန်လိုက်သည်မှာ သောက်သောက်လဲ။ ဆူနမ့်ဆီက သတင်းကြားလိုက်ရတယ့် ခဏ စန်းထွန်းတကောင် တသောသောနဲ့ရယ်မောလို့ ။ ကိုယ်သာ ဆိုင်ဖူးနေရာမှာသာဆိုရင် ရယ်မောနိုင်မယ် မထင်။
တနင်္ဂနွေနေ့ လည်မှာတော့ အိုဟိုင်းရိုးပြည်နယ် စင်စင်နာတီကနေ မိုင်၂၀၀ ၃နာရီခွဲ မောင်းရတယ့် အင်ဒီယားနားပြည်နယ် ဖို့ ဝိန်းဆီ ချီတက်ပါတယ်။ ဟိုင်းဝေးလမ်းတွေရဲ့အမြန်လမ်းတွေမှာ မိုင်ကုန်မောင်းကာ၊ တချို့ မြို့ငယ်လေးရဲ့မြို့လယ်ကောင်ကို ဖြတ်ကာ၊ ဟိုင်းဝေးလမ်းတွေ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့လမ်းတွေမှာ ကားတစီးတလေမှတောင် မတွေ့ ဘဲ တစီးတည်း ထီးထီးကြီး မောင်းကာ၊ ရိတ်သိမ်းထားတဲ့ ပြောင်းဖူးလှိုင်းတွေ၊ ရိုးပြတ်ဝါတွေ၊ ရောင်စုံခြယ်ထားတဲ့ သစ်ပင်တွေကို ဖြတ်သန်းကာ ခရီးနှင်ပါတယ်။
မစားရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ချဉ်ပေါင်ကြောင်၊ ဘာလချောင်ကြော်၊ ငါးပိထောင်း၊ ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိချက်၊ ဆိတ်သား၊ ငါးသလောက်ပေါင်းတွေ ဝယ်ပါတယ်။ ရွှေပန်းပွင့်တံဆိပ် စွန်တန်၊ ချဉ်ဇော်ခါးသီး ရယ်ဒီမိတ်ထုတ်ကို ရေနွေးနဲ့ဖျော်တာတောင် အမေရိကန်တွေက ပိုးကောင်နံ့ရပါသတဲ့။ သစ်တိုသီးငါးပိချက်ကိုလည်း အကောင်သေလို့ပုပ်နံ့ ရသလိုတဲ့။ ငါးပိထည့်ချက်တယ့်နေ့ က ဆူနမ်က နံ့ လို့ ပါတဲ့။ ရယ်ဒီမိတ် မုန့် တီချက်တာ အနံ့ ဆိုးတယ်တဲ့။ ရုံးကို ပုဇွှန်ကြော်ယူသွားတာ အနံ့ ရှိလို့မိုက်ခရိုအပူပေးပြီး ချက်ချင်းဖွင့် မစားသေးဘဲ ငါးမိနစ်လောက်ထား အေးသွားတော့ အနံ့ သိပ်မထွက်ဘူး ဒီတော့မှ စားတဲ့ တရုတ်ကြီး ပီတာက။ အမေရိကန်တွေက အနံ့ တော်တော် sensitive ရှိတယ်။ ကျောင်းစရောက်ရောက်ခြင်း အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှု သင်ခန်းစာ သင်ရစဉ်တုန်းက အင်တာဗျူးမှာ အရည်အချင်းတူနေရင် လက်မြောက်ခိုင်းပြီး အနံ့ မနံတယ့်သူကို ရွေးတယ်ဆိုတဲ့ ကာတွန်းလေးကို သွားသတိရတယ်။ အဲဒါ အမှန်ဗျား။
အိမ်ရှင်အမေရိကန်မက UofL မှာ မိန့် ခွန်းပြောနေတယ့် လေဒီကို တီဗွီမှာ တွေ့ လိုက်တယ်။ Great Job ! ဆိုပြီး မတ်ဆေ့ပို့ လာပါတယ်။ စက်တင်ဘာ ၂၅ မနက်မှာတော့ ဖို့ ဝိန်းမြို့ခံတွေသာမက အနီးအနားပြည်နယ်ကနေ ချီတက်လာကြတယ့် လူတွေဟာ အမေစုကို ကြိုဆိုဖို့Memorial Coliseum Hall ကို စုဝေးကြပါတယ်။ ထောင်နဲ့ချီတယ့် မြန်မာတွေဟာ မနက်၉နာရီမတိုင်ခင်ကတည်းက ရောက်ရှိနေကြပါတယ်။ အမေစုကို လေးစားကြတယ့် အမေရိကန်အများအပြား တက်ရောက်ပါတယ်။ ဖို့ ဝိန်းမြို့တော်ဝန် Tom Henry၊ ဆီးနိတ်တာ အမတ် Dan Coats၊ ပါဒူးတက္ကသိုလ်က Vicky Carwein တို့ က အမေစု မိန့် ခွန်းမပြောခင် နှုတ်ခွန်းဆက်စကားဆိုပါတယ်။
မိန့် ခွန်းပြောပြီး မေးထားတာတွေ ဖြေဆိုပါတယ်။ စကားလုံးတိုင်းဟာ အမျှော်အမြင်ကြီးမှု၊ ညဏ်ပညာတွေ ပြည့်ဝပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း နိုင်ငံတကာက လေးစားမှုကို ခံရတာ။ လူတယောက်ကို လူဆိုး၊ လူကောင်း၊ လူတော်ဆိုတာထက် သင်ယူလို့ ရတယ့်သူရယ်၊ သင်ယူလို့ မရတယ့်လူရယ်လို့ ပဲ မြင်ပါတယ်တဲ့။ ကိုယ်ရောက်ရှိတယ့်နေရာမှာ တတ်နိုင်သလောက် သင်ယူဖို့ ။ ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ့်နိုင်ငံကို ကျေးဇူးသိဖို့ ၊ ကိုယ်စွမ်းအား၊ ညဏ်စွမ်းအားတွေ ထည့်ဝင်ဖို့ ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံသားခံယူထားပေမယ့် မြန်မာဆိုတာ ဖြတ်တောက်မှာ မဟုတ်တယ့်အကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားမှာ နေပေမယ့်လည်း အမိနိုင်ငံတော် ဘက်စုံဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကိုယ်ကျွှမ်းကျင်တယ့်ဘာသာရပ်တွေနဲ့ကိုယ်တတ်စွမ်းနိုင်သလောက် အကျိုးပြုဖို့ ။
နိုင်ငံရေးမှာ အမြတ်ထုတ်ချင်တယ့် လူတွေကိုတော့ နိုင်ငံရေဆိုတာ လူထုအကျိုးဖြစ်တာကြောင့် နာမည်ကြီးချင်လို့လုပ်တာမလုပ်ဘဲ လူထုအတွက်ဖြစ်ရမယ်။ မလုပ်ချင်လည်း လုပ်ရမယ်၊ ဆုံးရှုံးသွားလည်း လုပ်ရမယ်၊ ချီးမွမ်းတာလည်း ခံရမယ်၊ ကဲ့ရဲ့ တာလည်းခံရမယ်၊ ဝေဖန်ခံရမယ်၊ ကိုယ့်လိပ်ပြာကို လိပ်ပြာခုံရုံးမှာ စစ်ဆေးခံနိုင်ရမယ်တဲ့။ ရခိုင်အရေး၊ ကချင်အရေးမှာ မဝေဖန်တဲ့အတွက် သူ့ ကို ဝေဖန်မယ်ဆိုရင် ခံယူဖို့ အသင့်ပါတဲ့။ တဖက်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ရှုံ့ ချရင် ပြသနာတွေ ကြီးလာမယ်။ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးအဖြေရှာရမယ်။ လုပ်ရဲတာ သတ္တိမဟုတ်ဘူး။ ခံရဲမှ သတ္တိတဲ့။ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာစကားကို မမေ့ကြဖို့မှာပါတယ်။
နိုင်ငံရပ်ခြားသွားကြမယ့် မြန်မာတွေကို မှာဖို့ စကားများများ မရှိပါဘူး။ ကြိုးစားဖို့ ၊ သင်ယူဖို့ နဲ့ညီညွှတ်ကြဖို့ ။ အမေစု ဒီစကားပြောတော့ အမေစုကြိုဆိုရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ တာတောင် နှစ်ဖွဲ့ ကွဲတယ့် ရွှေမြန်မာတွေ ရယ်လိုက်ကြတာ မှန်လိုက်တာဆိုပြီးတော့လေ။ မြန်မာစကားပြောတတ်ပြီး မြန်မာစာမရေးတတ်လို့သူ့ အစ်မကို ရေးခိုင်းရတယ်ဆိုတယ့် သမီးလေးရဲ့မေးခွန်းကို ဖတ်ရတော့ မိဘတွေ ပြန်မေးလိုက်လေ သမီးကို ဘာလို့ မြန်မာစာ မသင်ပေးသလဲလို့ ဆိုတော့ အားလုံးပွဲကျကြတယ်။ အနာဂတ်ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေ မြန်မာစာတတ်အောင် မြန်မာအင်အားများတယ့် ဖို့ ဝိန်းလိုနေရာမျိုးမှာ မြန်မာစာသင်ကြားရေးကျောင်းတွေထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။
အမေစုနဲ့ဓာတ်ပုံတခါလောက် တွဲရိုက်ချင်ပေမယ့် လူတိုင်းကလည်း တွဲရိုက်ချင်နေတာ။ ခုလို အဝေးကနေ မြင်ပြီး မိန့် ခွန်းနားထောင်ရတာကိုက ဟုတ်လှပြီ။ အဲဒီနေ့ ကတော့ မြန်မာဝတ်စုံ ဝတ်လေ့ဝတ်ထမရှိသော စန်းထွန်းတယောက် မြန်မာဝတ်စုံကို နှစ်သက်မြတ်နိုးစွာ ဝတ်ဆင်နေခဲ့သည်။ လက်ကမ်းစာစောင်ထဲက အမေစုအကြောင်းကို ဖတ်ချင် ဖတ်လို့ ရအောင် ကူးပေးလိုက်ပါတယ်။
Aung San Suu Kyi was elected in April 2012 asaMember of Parliament in the Burmese national government. She also serves as the Chairperson and General Secretary for the National League of Democracy in that country.
The daughter of General Aung San, founder of the Burmese army andaprincipal in the negotiations for Burmese independence from Britain, Aung San Suu Kyi was among the leaders of the democracy movement in Burma in 1988 and was one of the founders of the National League for Democracy that year. She was placed under house arrest by the ruling junta in 1989 and remained in custody until being released in 2010.
In her 2010 book Freedom from Fear, Aung San Suu Kyi asserts, "It is not power that corrupts but fear. Fear of losing power corrupts those who wield it and fear of the source of power corrupts those are subject to it." In that same work, she observes, "If ideas and beliefs are to be denied validity outside the geographical and cultural bounds of their origin, Buddhism would be confined to north India, Christianity toanarrow tract in the Middle East and Islam to Arabia." She has also offered the hopeful suggestion that "we will surely get to our destination if we join hands."
Aung San Suu Kyi earned her bachelor's in Philosophy, Politics and Economics from St. Hugh's College, Oxford and her doctorate in Oriental and African Studies at the University of London. She has received international recognition for her efforts on behalf of democracy in Burma including the Nobel Peace Prize. Last week she received the Congressional Gold Medal. Perhaps the most meaningful of the honors in that Burmese people refer to her as Daw Aung San Suu Kyi, using the title of respect and honor bestowed on women of importance in their family and their culture.
စက်တင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၂။
စန်းထွန်းဆီ မရောက်တာတောင် ကြာပြီ။
အမေစုဆီ ရောက်အောင်သွားနိုင်တာ ချီးကျူးပါတယ် စန်းထွန်းရေ .. ။ စန်းထွန်းရဲ့ ဒီပို့စ်တခုထဲမှာ အကြောင်းအရာ ပေါင်းစုံ ဖတ်လိုက်ရလို့ ဗဟုသုတတွေ အတော်လေး ရသွားပြီ။
ကားမောင်းတာတော့ သတိထားနော်။ ရာသီဥတုလဲ အေးလာပြီ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်အုံး စန်းထွန်းလေး ... ။
ရပ်ကွက်ထဲမှာဗျာရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အသောအမောလေး
တို့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြင်မှာတစ်ခါမှ မတွေ့ရသေးဘူး..
မိန့်ခွန်းတွေလည်း အင်တာနက်ကနေသာ နားထောင်ဖူးတာ.။
ခုလို တစ်ခေါက်လောက် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တွေ့ပြီး နားထောင်ချင်သေးတယ်။